किन बिथोलियो डा. केसीसँगको वार्ता ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २९, २०७४-सरकारले आमरण अनशन तोड्न पठाएको प्रस्तावमा डा. गोविन्द केसीका मुख्य माग सम्बोधन नभएपछि बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको केसीका सहयोगीले बताएका छन् । डा. केसीले ‘माथेमा प्रतिवेदनअनुसार अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने’ मुख्य माग राखेका छन् । सरकारले शुक्रबार दिउँसो डा. केसीलाई आमरण अनशन तोड्न प्रस्ताव पठाएको थियो ।